Izinto Best To Do In London nendlela yokuzifumana Kukhona | Gcina A Isitimela
ekhaya > Qeqesha uKhenketho e-UK > Izinto Best To Do In London nendlela yokuzifumana Kukhona
Xa kuziwa ukutyelela iingqukuva eYurophu edume, London ngokungathandabuzekiyo phezulu kuluhlu wish zonke babakhenkethi kwaye kukho Izinto ezininzi To Do eLondon. Imelwe elide, zinembali enika umdla; yezinto ezintle izinto; kwaye kukho ezininzi izinto ukwenza khona. Enoba olulula okokoko abakhenkethi ofuna ukufumana ukwazi ukuba zendawo isiko, okanye wamazwe befuna injabulo, London inento akugcinele kuwe.
Kanjalo, ngaphandle kokwazi ukuba mabenze ntoni eLondon, loo nto ke kubalulekile ukuba bana phandle kwizicwangciso yokuhamba kwakho. Ukufumana apho ngololiwe yenye yezinto ezininzi iinketho zendalo, ingakumbi ukuba wena uhamba ukusuka kwizixeko yaseYurophu ezinkulu ezifana Paris, Amsterdam, okanye Berlin. Nanga amagqabantshintshi ngemisebenzi London kunye noololiwe eziya kukunceda uhlele iholide yakho:
Izinto esizithandayo Ukwenza eLondon
Xa isixeko zinkulu London, ukuvala phantsi uluhlu lemisebenzi iinketho ezimbalwa nzima. soze Uya kubona zonke ozibonayo ukubamba yonke nakho London lakwa- ngesinye. Yiyo loo nto sincoma sokucwangciso izinto eziphambili ngokubaluleka zakho kwangethuba.
Kwabo abamfunayo Izinto To Do eLondon ezinxulumene shopping, Iimarike ahlukeneyo ziya kuba ukuqaqambisa yotyelelo lwakho. Ngaba ufuna ukuba lakwa-, ukudla ndawo? Jonga Borough Kwimakethi kwaye isampula yayo iyathanda ezizwe, okanye adle kwenye zokudlela ezikufuphi. Ukuba ngaphezulu kwi mood ngenxa ivenkile isebe yokuthenga, Tshazwa indawo enkulu. okukanye, ukuya kuzingela ezinye kwakudala epholile Portobello Road Market.
Ukuba uhambo lwakho ukuya eLondon iye ngaphezulu womlinganiswa lemfundo, kubutha kwezinye iindawo zenkcubeko esixeko. Ukusuka kokuya kuvuselelwa KaShakespeare Globe ukufunda malunga Tower of London, uya kuba nokuninzi ukuze wenze. Singathanda kwakhona besonwabela zobugcisa owayephila kwi Tate Modern kwi South Bank, kwakunye ngokundwendwela i Centre Southbank.
Utrecht Uqeqesha London
EStrasbourg ukuba Uqeqesha London
Ukufumana ukuya eLondon ngu Train eParis, Amsterdam, Berlin
Uyakwazi ukufika London ukusuka Paris, Amsterdam, yaye Berlin lula nge Eurostar, oololiwe ahamba no Thalys. Ezinye zawo ezingqongileyo ukuqala kuya kuba yindlela lemvelo yokufikelela London ngaphezu kwabanye. Umzekelo, ungakwazi ukuba akhwele Eurostar high-speed ngqo nokuqeqesha ukuya eLondon eParis, uze ube khona kancinane iiyure ezimbini ezinesiqingatha.
Xa kuziwa ukuya eLondon ukususela Amsterdam Berlin, ukusuka Amsterdam, ungakwazi ukuthatha Eurostar ngqo okanye omnye ukhetho omhla ukuze kuqala ukuya eBrussels nge Thalys uze akhwele Eurostar eBrussels ukuya eLondon. the uhambo kuthatha malunga neeyure ezine ngaloo ndlela yeyona ndlela fastest ukufikelela eLondon ukususela eAmsterdam ngololiwe.
Ukungena elikomkhulu UK ukusuka eBerlin ngololiwe kuya kufuna utshintsho ezimbini. Umlenze yokugqibela hambo kuyafana Amsterdam, uze wayekhwela Eurostar. kunjalo, enye indlela ukuqeqesha zakuhamba ukusuka Berlin ukuya Cologne, nina zizwe ukukhwela uloliwe ukuya eBrussels. Yi uloliwe fastest Uhambo olusuka eBerlin ukuya eLondon yaye kuthatha kancinane ngaphantsi ke 10 iiyure uze ke unako ukwenza zonke izinto ozifunde ngezinto ukwenza eLondon.
Ukulungele Fumana ukuya eLondon?
Xa sele ugqibile izinto ozithandayo ukwenza eLondon iya kuba, wena kudingeka nje ukuba wenze i uhambo! Ukufumana apho ngololiwe kulula, ngoko uye ubhukishe izihlalo zakho iholide kumnandi.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)